CLIA: Taiwan na-enwu dị ka ebe ịtụnanya maka ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na Asia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » CLIA: Taiwan na-enwu dị ka ebe ịtụnanya maka ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na Asia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • News • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ahịa Cruise na-aga n'ihu na Asia, n'etiti Taiwan na-enwu dị ka ebe dị ịtụnanya maka ụlọ ọrụ ahụ. Dabere na nyocha CLIA, ịgagharị aghọrọla njem njem njem kachasị ọsọ na Eshia, ebe Taiwan bụ ahịa nke abụọ kachasị ukwuu na mpaghara ahụ. Princess Cruises, usoro ntanetị 1 zuru ụwa ọnụ nke bidoro ịrụ ọrụ na Taiwan kemgbe 2014, gbasoro ahịa obodo na nsonaazụ pụtara ìhè.
Dabere na nyocha nke InsightXplorer na 2018, Princess Cruises enwewo mmasị kachasị elu, ọ bụkwa ụdị ụgbọ mmiri kachasị amasị n'etiti ndị ahịa na Taiwan. Site na 2014 rue 2018, Princess Cruises amụbaala okporo ụzọ ya ugboro 6.5, ọnụ ọgụgụ ndị njem were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu iri. Jan Swartz, Onye isi oche nke Princess Cruises, gara Taiwan nke ugboro atọ iji kwupụta atụmatụ mbata ụlọ Taiwan na 10 na Stuart Allison, Onye isi oche Onye isi oche nke Princess Cruises Asia Pacific Commerce & Operations. Nwa eze dị ebube, nke emere maka Asia, ga-arụ ọrụ site na ọdụ ụgbọ mmiri Keelung maka ọnwa isii n'afọ ọzọ site na Machị ruo August.
"Na 2018, Princess Cruises bu ụzọ zipụ ụgbọ mmiri atọ na ọdụ ụgbọ mmiri Keelung," ka Jan Swartz, Princess Cruises President kwuru. “Taiwan abụrụla ahịa na-atọ ụtọ na Asia na nke atọ kachasị n'ụwa niile. Anyị bụkwa ụgbọ mmiri nke na-eburu ọtụtụ ndị njem na nkezi kwa ụbọchị na ọdụ ụgbọ mmiri Keelung. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị rụzuru ihe ndị a dịka anyị na-ahụta ha dịka mbọ nke mbọ anyị na Taiwan. Anyị na-agba mbọ ka àjà enwekwukwa na iche iche ọrụ na ngwaahịa na obodo ndị njem. ” N'ime afọ isii na-abịanụ, Princess Cruises ga-anabata ụgbọ mmiri ọhụrụ ise n'ụgbọ mmiri anyị, gụnyere Sky Princess na Ọktọba a, Enchanted Princess na June 2020, na nke atọ a na-akpọghị ụgbọ mmiri na 2021. ụgbọ mmiri abụọ LNG (Liquefied Natural Gas). ụgbọ mmiri ga-esonye na nsoro ahụ.
Stuart Allison, Asia Pacific Commerce & Operations Senior Vice President, kwukwara ihe banyere ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-arịwanye elu na Asia. Allison kwuru na "ọnụọgụ ndị njem njem na Esia ejirila 4.6% na 2018 rịa elu na nde 4.24, mgbe 20.6% toro na 2017," Allison kwuru. “Cruise abụrụla njem njem njem kachasị ọsọ na Eshia, ndị njem nọ n’Eshia na-azazi 14.8% nke ahịa ụwa. Taiwan, ịbụ onye kachasị mkpa na njem ụgbọ mmiri Asia, na 2018 naanị, ahụla ndị njem 391,000 na njem ụgbọ mmiri, mmụba 4.7% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Site na 2016 ruo 2018, ọnụọgụ ejirila 35% kwalite. Na 2018, Princess Cruises buuru ndị njem 394,000 na Eshia wee debezie ọnọdụ zuru oke iji gboo mkpa na-eto eto dịka ọsọ ọsọ mba ụwa na-eto ngwa ngwa n'ụwa. Princess Cruises na-enye ndị njem Asia njem nlegharị na njem njem 125 na njem nleta mara mma gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ 10 na Asia site na ụgbọ mmiri asatọ.
Stuart Allison, jiri ohere a kwuputa atụmatụ ebugharị Taiwan na 2020. "Site na Princess Princess, anyị nwere ụgbọ mmiri mbata nke mbụ anyị na Taiwan maka oge zuru oke na-enye njem ụgbọ mmiri 43 gafere 158 ụbọchị na 2020. Anyị na-ebukwa n'uche iburu ndị njem 160,000 si Taiwan n'afọ ọzọ. Dịka Japan bụ ebe kachasị amasị ndị njem mpaghara, Princess Cruises sooro ndị ndụmọdụ ndụmọdụ njem 11 rụọ ọrụ, gụnyere Wayzọ njem kachasị mma, njem mkpagharị, njem njem, Pro Tour, SET Tour, Njem ọdụm, Njegharị Phoenix, Star Travel, njem kacha mma, ezTravel , na Ta Hsin Tour, iji hazie njem njegharị na mmiri gaa Japan na Korea maka okooko osisi cherry. Ekpuchi Kumamoto Port dị ka nkwụsị ọhụrụ, yabụ ndị ọbịa na-enwe ọtụtụ ụdị na atụmatụ njem ha. Nwanyị dị ebube ga-eje ozi n'oge ọkọchị nke July na August maka oge mbụ na Japan na Korea. Itzọ njegharị ọhụrụ na ọrụ ndị ka mma ga-ebuli ahụmịhe nke ndị ọbịa anyị n'oge ezumike. ”
Na 2018 na 2019, ọdụ ụgbọ mmiri Keelung abụrụla ọdụ ụgbọ mmiri maka ọmarịcha nwa nwanyị dị ebube, Sun Princess a rụzigharịrị, na ụdị Princess Japanese nke ndị Japan. Na 2020, Princess Dị ebube, nke ndị ahịa niile nabatara, ga-esonye ma jee ozi na Taiwan ruo ogologo oge. Princess Cruises ga-aga n'ihu na-eme atụmatụ ọtụtụ njem dị iche iche ma bulie ogo ọrụ na ụgbọ mmiri, na -emepụta ezumike ezumike ọzọ kwesịrị ncheta maka mmadụ niile.
cherry CLIA abịa comments azụmahịa tụnyere ndị ahịa nrughari Industrylọ ọrụ ụgbọ mmiri Gbọ mmiri cruise market ndị njem ụgbọ mmiri Gbọ mmiri ezumike njem Isesgbọ mmiri na-eme njem ụbọchị choro design e mere diamond mgbalị asatọ ahụmahụ ọkacha mmasị nsoro full gas ahịa ụwa na-agbagha -eto eto kasị elu ọdụ ụgbọ mmiri hotspot nnukwu mụbara njegharị Jan Japan Japan iso June Key Korea Oge ntụrụndụ njem njem ndụ akara ọdụm mara mma njem zuko ọnwa aha ya bụ eke fọrọ nke nta ụgbọ mmiri ọhụrụ nọmba October àjà -enye abanyela arụ ọrụ arụmọrụ ohere nhọrọ pụtara ìhè Pacific njem nọmba ndị njem oge Phoenix plan atụmatụ player ewu ewu n'ọdụ ụgbọ mmiri ọdụ ụgbọ mmiri ọdụ ụgbọ mmiri kwadoro adịchaghị Princess Princess njem ụgbọ mmiri ngwaahịa mpako àgwà mmata pụta oge nke abụọ -ahụ agadi Onye isi oche -eje ozi ọrụ ọrụ Nịm ship ụgbọ mmiri igwe n'oge na-adịghị mmiri Star malitere Kwụsị style n'oge okpomọkụ Sun nnyocha e mere TA Taiwan Mpaghara ugboro tour njegharị atụmatụ njem ezumike ezumike osote onye na-eso onye isi gara nleta ejegharị ejegharị ụzọ welcome nabatara Arụ ọrụ n'ụwa